FOAM VS FRAYDRARTRARTRARRARRARTRARRARTRIR | Rayson
Foam vs n'oge opupu ihe ubi
Anyị na-ege ntị nke ọma na ihe ndị ahịa chọrọ ma na-echekwa ahụmịhe ndị ọrụ na mgbe niile n'uche mgbe ị na-emepe ụfụfụ vs mmiri. A na-anakwere ihe eji eme ihe kwesiri ekwesi iji hụ n'ogo ngwaahịa na arụmọrụ ya kachasị gụnyere rayson. Na mgbakwunye, o nwere ọdịdị nke e mere iji duzie ụlọ ọrụ.
Ya na ụfụfụ zuru oke vs mmiri na-emepụta ihe na ndị ọrụ nwere ahụmahụ, ndị na-eweta ndị na-emepụta ihe, zụlite, na nwalee ihe niile arụ ọrụ. N'oge niile usoro ahụ dum, ndị ọkachamara QC anyị ga-elekọta usoro ọ bụla iji hụ na ogo ngwaahịa. Ọzọkwa, nnyefe anyị bụ n'oge, nweekwa ike igbo mkpa nke onye ahịa ọ bụla. Anyị na-ekwe nkwa na ezigara ndị ahịa na nchekwa na ụda. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere ụfụfụ anyị na-enye matram, kpọọ anyị ozugbo.
Taa bụ nnukwu ụbọchị Rayson na-ezube iwebata ngwaahịa kachasị ọhụrụ ndị ọha. O nwere aha gọọmentị a na-akpọ ụfụfụ na matraasi ma na-enye ya na ọnụahịa asọmpi.